ကားလောကကို ပြောင်းလဲစေခဲ့သော ကားဒီဇိုင်း (၁၃) ခု | CarsDB
ကားလောကကို ပြောင်းလဲစေခဲ့သော ကားဒီဇိုင်း (၁၃) ခု
လမ်းမတွေပေါ်မှာ မောင်းနှင်နေတဲ့ မော်တော်ကားကို တီထွင်ခဲ့တာ ခုဆိုရင် ရာစုနှစ်တစ်ခုကျော် ကြာမြင့်ခဲ့ပါပြီ.။ ဒီအချိန်မှာ ကုမ္ပဏီပေါင်းများစွာက ကားမော်ဒယ်ပေါင်းများစွာကို တီထွင်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်.။ ကားအများစုဟာ ဒီဇိုင်းတစ်ခုခုကို အခြေခံပြီး ဖန်တီးခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး Innovative လို့ခေါ်ရမယ့် ဒီဇိုင်းပိုင်း တီထွင်ဆန်းသစ်ခဲ့တဲ့ ကားအမျိုးအစားကတော့ အနည်းငယ်သာရှိပါတယ်.။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ ကားလောကကို ယခုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတဲ့ ကားဒီဇိုင်းတွေအထိ ပြောင်းလဲလာအောင် ရှေးဦးတီထွင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကို စုစည်းတင်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်.။
⦁ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ကား
⦁ Assembly lines လို့ခေါ်တဲ့ ကားအစိတ်အပိုင်းများကို စုစည်းတပ်ဆင်ပြီး နောက်ဆုံး Final Product ရရှိအောင် တည်ဆောက်တဲ့နည်းလမ်းကို အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးကား
⦁ Electric Starter စတင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ကား
⦁ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး အလုံပိတ်ကား
⦁ V8 အင်ဂျင်အသုံးပြုထားသော ပထမဆုံးကား
⦁ Concept Car လို့ခေါ်တဲ့ ဈေးကွက်တင်ရောင်းချခြင်း မပြုခင် ကြိုတင်ပြသသော အလေ့အထကို စတင်ဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ကား
⦁ သမိုင်းတစ်လျှောက် ကမ္ဘာ့ရောင်းအားအကောင်းဆုံးကား
⦁ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း စစ်တပ်သုံးအဖြစ် တီထွင်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ပြည်သူလူထုအကြား အလွန်ရေပန်းစားလာခဲ့တဲ့ကား
⦁ ရှေ့ဘီးယက် နှင့် လေးဘီးယက်စနစ်များ ခွဲခြားထုတ်လုပ်ဖြစ်အောင် ဒီဇိုင်းပိုင်း စတင်တည်ဆောက်ခဲ့သောကား
⦁ နှစ်ငါးဆယ်ကျော်ကြာသည့်တိုင် အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ပြိုင်ကားဒီဇိုင်းကို စတင်ဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ကား
⦁ အမေရိကန်နိုင်ငံ လူငယ်ထုကို ဆွဲဆောင်ဖို့ Sport Type ဆန်ဆန် ဖန်တီးခဲ့တဲ့ကား
⦁ Hybrid လို့ခေါ်တဲ့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားနဲ့ လောင်စာဆီ တွဲဖက်မောင်းနှင်နိုင်တဲ့ ပထမဆုံးကား
1885 ခုနှစ်မှာ ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Benz's Patent-MotorWagen ဟာ တစ်ခုတည်းသော အကြောင်းပြချက်အတွက် Innovative ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်.။ အဲဒီအကြောင်းပြချက်ကတော့ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးကား ဖြစ်လို့ပါပဲ.။ ဒီကားကို မတီထွင်ခင်တုန်းက လူတွေဟာ မြင်းတွေလှည်းတွေနဲ့ ခရီးသွားကြပါတယ်.။ ဒီကားဟာ (၂) ယောက်ထိုင်ခုံတစ်ခုပါဝင်ပြီး ဆလင်ဒါတစ်လုံးထိုး၊ လေးချက်အင်ဂျင်တစ်လုံးကို ကားအနောက်ဘက်မှာ တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်.။ ဒီကားမှာ ဘီးသုံးဘီးသာပါဝင်ပြီး ဘီးတွေကို ဝါယာကြိုးတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်.။ ထိုင်ခုံကိုတော့ စတီးဘောင်ကွတ်ထားပြီး သစ်သားနဲ့ ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်.။ ဒီကားကို အရောင်းမြှင့်တင်ဖို့အတွက် Benz ရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ Bertha ဟာ ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့အတူ မိုင် ၁၂၀ ကွာဝေးတဲ့ခရီးကို မောင်းနှင်ပြခဲ့ပါသတဲ့.။
ဒီကားဟာ ကားလောကကို အချက်သုံးချက်နဲ့ ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်.။ ပထမအချက်ကတော့ Assembly Lines လို့ခေါ်တဲ့ ကားအစိတ်အပိုင်းများကို စုစည်းတပ်ဆင်ပြီး နောက်ဆုံး Final Product ရရှိအောင် တည်ဆောက်တဲ့နည်းလမ်းကို အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးကား ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.။ ဒုတိယအချက်ကတော့ လူလတ်တန်းစား Level အထိ လက်လှမ်းမှီအောင် ဈေးနှုန်းလျှော့ချထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်.။ တတိယအချက်ကတော့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကား Market ကြီးတစ်ခု ဖြစ်လာအောင် စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်.။ Assembly Line ကိုအသုံးမပြုခင်တုန်းက ကားတည်ဆောက်ရာမှာ အစအဆုံး တစ်နေရာတည်းမှာ အပြီးအစီးတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.။ Henry Ford ဟာ Assembly Line နည်းလမ်းကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာမဟုတ်ပေမယ့် ကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပထမဆုံးစတင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်.။ ယနေ့ခေတ်မှာလဲ ထုတ်လုပ်တဲ့ နည်းစနစ် (ဥပမာ စက်ရုပ်လက်တံများ အသုံးပြုထုတ်လုပ်ခြင်း) တွေပြောင်းလဲခဲ့ပေမယ့် Assembly Line နည်းစနစ်ကိုတော့ ဆက်လက်အသုံးပြုနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်.။ Assembly Line စနစ်ကို အသုံးပြုခဲ့တဲ့အတွက် ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်ခဲ့တာမို့ လူချမ်းသာမဟုတ်တဲ့ လူလတ်တန်းစားတွေ ဝယ်ယူလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်.။ Ford ဟာ ကားတွေကို ကမ္ဘာအနှံ့မှာ စက်ရုံတွေတည်ထောင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်လို့ တင်ပို့တဲ့အခါ သယ်ယူပို့ဆောင်ခ ပေးစရာမလိုတော့ပါဘူး.။ အခြားကားကုမ္ပဏီတွေက ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ကားတွေကို တည်ဆောက်ထုတ်လုပ်လာခဲ့ပေမယ့် Ford ကတော့ Model T ရဲ့ ဈေးနှုန်းကိုလျှော့ချနိုင်ဖို့ ဒီဇိုင်းနဲ့ အခြားလိုအပ်ချက်တွေကို တိုးမြှင့်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး.။ ဒါဟာ အခြားကားကုမ္ပဏီတွေကို အခွင့်အရေးပေးသလို ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် ကားလောကအနာဂတ်အတွက် အကျိုးရှိစေခဲ့ပါတယ်.။
Cadillac ကို Henry Ford က စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် ကုမ္ပဏီအတွင်း အငြင်းပွားမှုတစ်ခုရှိခဲ့လို့ နောက်ပိုင်းမှာ Ford ဟာ Cadillac ကို စွန့်ခွာခဲ့ပါတယ်.။ Cadillac ဟာ Ford မပါဘဲ ဆက်လက်ရပ်တည်ရင်း 1912 အရောက်မှာ Touring Edition လို့ခေါ်တဲ့ ကားမော်ဒယ်တစ်မျိုးကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်.။ ဒီကားဟာ Electric Starter ကို စတင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးကားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်.။ ဒီကားကို မထုတ်လုပ်ခင်တုန်းက ကားတွေကို စက်စနှိုးတဲ့အခါမှာ အင်ဂျင်ကို လက်နဲ့လှည့်ပြီး နှိုးရတဲ့အတွက် လက်ကောက်ဝတ်နဲ့ လက်ချောင်းတွေမှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတွေ အများကြီးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်.။ ဒီအချက်ကြောင့်ပဲ Touring Edition ဟာ ကားလောကကို တစ်ခေတ်ဆန်းစေခဲ့ပြီး အမျိုးသမီးကားမောင်းသူတွေကိုလဲ စွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်.။ ဒါကြောင့် Cadillac ဟာ ဒီကားရဲ့ ကြော်ငြာတွေမှာ အမျိုးသမီးရုပ်ပုံတွေ ထည့်သွင်းအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်.။
Essex ဟာအစပိုင်းမှာ Hudson ရဲ့ ကုမ္ပဏီခွဲအဖြစ် စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် လေးနှစ်ကြာအပြီးမှာ Model တစ်ခုအနေနဲ့ ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်.။ အဲဒီလေးနှစ်အတွင်းမှာ Essex ဟာ သေးငယ်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တဲ့ ကားလေးတွေ ထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်.။ ဒါ့အပြင် Essex ဟာ အလုံပိတ်ကားပုံစံကိုလဲ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး အမိုးဖွင့်ကားတွေကို အပို Option အနေနဲ့ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်.။ Essex ကြောင့်ပဲ ယနေ့ခေတ်ကားလောကမှာ အလုံပိတ်ကားတွေဟာ ပိုမိုအသုံးများခဲ့ပြီး Convertable လို့ခေါ်တဲ့ အမိုးဖွင့်ကားတွေကတော့ ဈေးပိုကြီးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.။
1932 ခုနှစ်အရောက်မှာ Ford's Model 18 ဟာ V8 အင်ဂျင်တွေကို စတင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ကားအမျိုးအစားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်.။ Ford ဟာ Model 18 နဲ့အတူတူ ဆလင်ဒါလေးလုံးထိုး Model B ကိုလဲ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့် Model 18 ရဲ့ အောင်မြင်မှုကိုတော့ မယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး.။ Model 18 ရဲ့ 3.6L V8 အင်ဂျင်ဟာ မြင်းကောင်ရေ ၆၅ ကောင်အား ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပြီး ကားလောကတစ်ခုလုံးကို ပြောင်းလဲစေခဲ့ပြန်ပါတယ်.။
1938 ခုနှစ်ထုတ် Y-JOB ဟာ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး Concept Car ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.။ General Motors ဟာ ကားမော်ဒယ်တစ်မျိုးကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းမပြုခင်မှာ အများပြည်သူကို မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အနေနဲ့ Y-Job ကို Concept ကားအဖြစ် ထုတ်လုပ်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.။ ဒီကားမှာ Electric သုံး Windows တွေ၊ pop-up headlights တွေ၊ ပိုမိုပြားပြီး ပါးလျှတဲ့ တံခါးလက်ကိုင်တွေနဲ့ လုံးဝိုင်းတဲ့ bumper တွေ တပ်ဆင်ထားပြီး BUICK ရဲ့ 1950 ပြည့်နှစ်များအထိ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ဒီဇိုင်းပိုင်းတွေ အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်.။ ကားရဲ့ Shell ဟာလဲ ယနေ့တိုင်အသုံးပြုနေတဲ့ ရေတံခွန်ဒီဇိုင်း ဖြစ်ပါတယ်.။
မြန်မာပြည်မှာ လိပ်ခုံးကားလို့ ခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ BEETLE ဟာ 1938 ခုနှစ်မှာ ပိုမိုသေးငယ်ကျစ်လျစ်ပြီး၊ မောင်းနှင်ရလွယ်ကူတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ ဈေးလဲမကြီးတဲ့ မော်ဒယ်အနေနဲ့ စတင်ထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး 1945 ခုနှစ်မှာ ဒီကားဟာ အများပြည်သူအကြားရေပန်းစားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.။ The Beetle ကားဟာ 2003 ခုနှစ်အထိ စုစုပေါင်း ၆၅ နှစ်ကြာအောင် ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာ သက်တမ်းအရှည်ကြာဆုံး မော်ဒယ်အဖြစ် စံချိန်တင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်.။ ဒီကားဟာ အစီးရေအများဆုံး ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကားအဖြစ်လဲ စံချိန်တင်ထားခဲ့ပြီး သက်တမ်းတစ်လျှောက် အစီးရေ ၂၁ သန်းအထိ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသတဲ့.။ ဒီကားကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သူကတော့ Ferdinand Porsche ဖြစ်ပါတယ်.။ သူဟာ နောက်ပိုင်းထုတ်လုပ်တဲ့ သူ့ကိုယ်ပိုင်ကားတွေမှာ Bettle ရဲ့ ကားဒီဇိုင်းဖြစ်တဲ့ အနောက်အင်ဂျင်နဲ့ နောက်ဘီးယက်ဒီဇိုင်းကို ဆက်လက်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်.။
Jeep ကားတွေကို ပထမဆုံး စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံ Butler, Pennsylvania အခြေစိုက် Bantam ကားကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်.။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း စစ်ရေးကိစ္စတွေမှာ အသုံးပြုဖို့ စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.။ ဒီကားထုတ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ စိတ်ဝင်စားစရာ အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ ဒီကားကိုစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီဟာ ဒေဝါလီခံရတော့မယ့်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး ဒီကားတွေကို သေးငယ်တဲ့ စက်ရုံလေးတစ်ခုမှာ ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.။ ကားထုတ်လုပ်ရာမှာ ပါဝင်သူတွေကတော့ စစ်တပ်ရဲ့ အရေးကြီးစစ်ဆင်ရေးကိစ္စတွေကို အောင်မြင်စေဖို့ ကူညီပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ မြို့ခံပြည်သူလူထုက ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါသတဲ့.။ ဒီကားဟာ တောတွေထဲမှာ၊ တောင်တွေကြားထဲမှာ၊ ကမ်းခြေတွေပေါ်မှာ မောင်းနှင်သွားလာနိုင်ဖို့ ထုတ်လုပ်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယနေ့ခေတ်မှာလဲ အရင်ခေတ်နဲ့တူညီတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ရှေ့ဆက်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်.။
BMC ရဲ့ Mini ဟာ ဆီစားသက်သာမှု၊ ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးမှု စတဲ့ Economy ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ကားအသေးဈေးကွက်ကို ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်.။ ယခုအခါမှာတော့ Mini တွေကို ရှေ့အင်ဂျင်၊ ရှေ့ဘီးယက်စနစ်နဲ့ ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်.။ Mini ဟာ နေရာစားသက်သာစေတဲ့ rubber cones တွေကို ဂီယာစနစ်အတွင်း စတင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ကားလဲ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.။
1957 မှာ ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ T43 ဟာ မောင်းနှင်သူရဲ့ အနောက်ဘက်မှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ဆလင်ဒါလေးလုံးထိုး 2.0L အင်ဂျင် မှတဆင့် နောက်ဘီး ၂ လုံးကို ပါဝါပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်.။ ဒီကားဟာ 1958 ခုနှစ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး Grand Prix ပြိုင်ပွဲကို အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ကားဖြစ်ပါတယ်.။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကတော့ ဒီကားအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ ကားတွေထဲမှာ သူ့ထက်အင်ဂျင်ပါဝါမြင့်မားတဲ့ 2.5L အင်ဂျင်တပ်ဆင်ထားတဲ့ကားတွေ ပါဝင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.။ ဒီကားဟာ ယနေ့ခေတ်ကျနော်တို့ သိနေကြတဲ့ Grand Prix ပြိုင်ပွဲဝင်ကားတွေကို အဆင့်မြှင့်တင်ပေးခဲ့တဲ့ ကားဖြစ်ပါတယ်.။
Mustang 1964 ဟာ Ford Falcon’s compact-sized economy car platform ပေါ်မှာ အခြေတည်ပြီး တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် အရှေ့ဘက်ပိုင်းကို ပိုမိုရှည်လျားစေပြီး အနောက်ပိုင်းကို အနည်းငယ်တိုထားခဲ့တဲ့အတွက် ပိုမိုပြီး Powerful ဖြစ်စေတဲ့အမြင်ကို ရရှိစေပါတယ်.။ ဒီကားဟာ မိသားစုသုံးကားမဟုတ်ဘဲ Sport Type အနေနဲ့ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Ford ကုမ္ပဏီရဲ့ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး ကားတစ်စီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်.။ ယနေ့ခေတ်အချိန်ထိ ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံး sport ကားတစ်စီးလဲ ဖြစ်ပါတယ်.။
12. CHRYSLER’S MINIVAN – 1984
1984 မှာ စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Minivan ဟာ မိသားစုသုံးကားဈေးကွက်ကို တစ်နှစ်အတွင်းပြောင်းလဲ စေခဲ့ပါတယ်.။ Minivan တွေဟာ Station wagon တွေကို အစားထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး Chrysler ဟာ Minivan တွေကို ထုတ်လုပ်ရာမှာ ဝယ်လိုအားကို ပြည့်မီအောင် ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အထိ ရောင်းအားကောင်းခဲ့ပါတယ်.။ ဒါကြောင့် ပြိုင်ဘက်တွေဟာ Minivan အမျိုးအစားကားတွေကို ထုတ်လုပ်လာခဲ့ပြီး ဈေးကွက်ဝေစုရယူဖို့ ယှဉ်ပြိုင်လာခဲ့ကြပါတယ်.။ Minivan ဟာလဲ ကားလောကကို ပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့ ကားအမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.။
13. TOYOTA’S PRIUS – 1997
1995 ခုနှစ် Tokyo Motor Show မှာ Toyota ဟာ Hybrid ကားအမျိုးအစားတစ်မျိုးကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်.။ ပထမဆုံး Prius ကားကို 1997 ခုနှစ်မှာ စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး Car of the Year Japan ဆု၊ 1998 ခုနှစ်မှာ Automotive Researchers’ and Journalists’ Conference Car of the Year ဆုတို့ကို အသီးသီးဆွတ်ခူးခဲ့ပါတယ်.။ Prius ဟာ ယနေ့ခေတ် Hybrid ကားတွေရဲ့ ပထမဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး Hybrid ကားလောကကို တစ်ခေတ်ဆန်းစေခဲ့တဲ့ ကားအမျိုးအစားတစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်.။
Curated by Aung Mon Chan
လမျးမတှပေျေါမှာ မောငျးနှငျနတေဲ့ မျောတျောကားကို တီထှငျခဲ့တာ ခုဆိုရငျ ရာစုနှဈတဈခုကြျော ကွာမွငျ့ခဲ့ပါပွီ.။ ဒီအခြိနျမှာ ကုမ်ပဏီပေါငျးမြားစှာက ကားမျောဒယျပေါငျးမြားစှာကို တီထှငျထုတျလုပျရောငျးခခြဲ့ကွပွီးဖွဈပါတယျ.။ ကားအမြားစုဟာ ဒီဇိုငျးတဈခုခုကို အခွခေံပွီး ဖနျတီးခဲ့ကွတာဖွဈပွီး Innovative လို့ချေါရမယျ့ ဒီဇိုငျးပိုငျး တီထှငျဆနျးသဈခဲ့တဲ့ ကားအမြိုးအစားကတော့ အနညျးငယျသာရှိပါတယျ.။ ဒီဆောငျးပါးမှာတော့ ကားလောကကို ယခုကြှနျတျောတို့မွငျတှနေ့ရေတဲ့ ကားဒီဇိုငျးတှအေထိ ပွောငျးလဲလာအောငျ ရှေးဦးတီထှငျဖနျတီးခဲ့တဲ့ ဒီဇိုငျးတှကေို စုစညျးတငျပွပေးထားတာဖွဈပါတယျ.။
⦁ ကမ်ဘာ့ပထမဆုံး ကား
⦁ Assembly lines လို့ချေါတဲ့ ကားအစိတျအပိုငျးမြားကို စုစညျးတပျဆငျပွီး နောကျဆုံး Final Product ရရှိအောငျ တညျဆောကျတဲ့နညျးလမျးကို အသုံးပွုခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးကား
⦁ Electric Starter စတငျအသုံးပွုခဲ့တဲ့ကား
⦁ ကမ်ဘာ့ပထမဆုံး အလုံပိတျကား
⦁ V8 အငျဂငျြအသုံးပွုထားသော ပထမဆုံးကား
⦁ Concept Car လို့ချေါတဲ့ စြေးကှကျတငျရောငျးခခြွငျး မပွုခငျ ကွိုတငျပွသသော အလအေ့ထကို စတငျဖျောဆောငျခဲ့တဲ့ ကား
⦁ သမိုငျးတဈလြှောကျ ကမ်ဘာ့ရောငျးအားအကောငျးဆုံးကား
⦁ ဒုတိယကမ်ဘာစဈအတှငျး စဈတပျသုံးအဖွဈ တီထှငျခဲ့ပွီး နောကျပိုငျးမှာ ပွညျသူလူထုအကွား အလှနျရပေနျးစားလာခဲ့တဲ့ကား
⦁ ရှဘေီ့းယကျ နှငျ့ လေးဘီးယကျစနဈမြား ခှဲခွားထုတျလုပျဖွဈအောငျ ဒီဇိုငျးပိုငျး စတငျတညျဆောကျခဲ့သောကား
⦁ နှဈငါးဆယျကြျောကွာသညျ့တိုငျ အသုံးပွုခဲ့တဲ့ ပွိုငျကားဒီဇိုငျးကို စတငျဖျောဆောငျခဲ့တဲ့ ကား
⦁ အမရေိကနျနိုငျငံ လူငယျထုကို ဆှဲဆောငျဖို့ Sport Type ဆနျဆနျ ဖနျတီးခဲ့တဲ့ကား
⦁ Hybrid လို့ချေါတဲ့ လြှပျစဈဓါတျအားနဲ့ လောငျစာဆီ တှဲဖကျမောငျးနှငျနိုငျတဲ့ ပထမဆုံးကား
1885 ခုနှဈမှာ ထုတျလုပျခဲ့တဲ့ Benz's Patent-MotorWagen ဟာ တဈခုတညျးသော အကွောငျးပွခကျြအတှကျ Innovative ဖွဈတယျလို့ပွောလို့ရပါတယျ.။ အဲဒီအကွောငျးပွခကျြကတော့ ကမ်ဘာ့ပထမဆုံးကား ဖွဈလို့ပါပဲ.။ ဒီကားကို မတီထှငျခငျတုနျးက လူတှဟော မွငျးတှလှေညျးတှနေဲ့ ခရီးသှားကွပါတယျ.။ ဒီကားဟာ (၂) ယောကျထိုငျခုံတဈခုပါဝငျပွီး ဆလငျဒါတဈလုံးထိုး၊ လေးခကျြအငျဂငျြတဈလုံးကို ကားအနောကျဘကျမှာ တပျဆငျပေးထားပါတယျ.။ ဒီကားမှာ ဘီးသုံးဘီးသာပါဝငျပွီး ဘီးတှကေို ဝါယာကွိုးတှနေဲ့ ခြိတျဆကျထားပါတယျ.။ ထိုငျခုံကိုတော့ စတီးဘောငျကှတျထားပွီး သဈသားနဲ့ ထညျ့သှငျးတညျဆောကျထားတာဖွဈပါတယျ.။ ဒီကားကို အရောငျးမွှငျ့တငျဖို့အတှကျ Benz ရဲ့ ဇနီးဖွဈသူ Bertha ဟာ ကလေးနှဈယောကျနဲ့အတူ မိုငျ ၁၂ဝ ကှာဝေးတဲ့ခရီးကို မောငျးနှငျပွခဲ့ပါသတဲ့.။
ဒီကားဟာ ကားလောကကို အခကျြသုံးခကျြနဲ့ ပွောငျးလဲစခေဲ့ပါတယျ.။ ပထမအခကျြကတော့ Assembly Lines လို့ချေါတဲ့ ကားအစိတျအပိုငျးမြားကို စုစညျးတပျဆငျပွီး နောကျဆုံး Final Product ရရှိအောငျ တညျဆောကျတဲ့နညျးလမျးကို အသုံးပွုခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးကား ဖွဈခဲ့ပါတယျ.။ ဒုတိယအခကျြကတော့ လူလတျတနျးစား Level အထိ လကျလှမျးမှီအောငျ စြေးနှုနျးလြှော့ခထြုတျလုပျခဲ့ပါတယျ.။ တတိယအခကျြကတော့ ကမ်ဘာလုံးဆိုငျရာ ကား Market ကွီးတဈခု ဖွဈလာအောငျ စတငျလုပျဆောငျခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ.။ Assembly Line ကိုအသုံးမပွုခငျတုနျးက ကားတညျဆောကျရာမှာ အစအဆုံး တဈနရောတညျးမှာ အပွီးအစီးတညျဆောကျခဲ့တာဖွဈပါတယျ.။ Henry Ford ဟာ Assembly Line နညျးလမျးကို စတငျတညျထောငျခဲ့တာမဟုတျပမေယျ့ ကားတှနေဲ့ပတျသကျပွီး ပထမဆုံးစတငျအသုံးပွုခဲ့တဲ့သူ ဖွဈပါတယျ.။ ယနခေ့တျေမှာလဲ ထုတျလုပျတဲ့ နညျးစနဈ (ဥပမာ စကျရုပျလကျတံမြား အသုံးပွုထုတျလုပျခွငျး) တှပွေောငျးလဲခဲ့ပမေယျ့ Assembly Line နညျးစနဈကိုတော့ ဆကျလကျအသုံးပွုနကွေဆဲဖွဈပါတယျ.။ Assembly Line စနဈကို အသုံးပွုခဲ့တဲ့အတှကျ ထုတျလုပျမှုကုနျကစြရိတျကို လြှော့ခနြိုငျခဲ့တာမို့ လူခမျြးသာမဟုတျတဲ့ လူလတျတနျးစားတှေ ဝယျယူလာနိုငျခဲ့ပါတယျ.။ Ford ဟာ ကားတှကေို ကမ်ဘာအနှံ့မှာ စကျရုံတှတေညျထောငျထုတျလုပျခဲ့တာဖွဈလို့ တငျပို့တဲ့အခါ သယျယူပို့ဆောငျခ ပေးစရာမလိုတော့ပါဘူး.။ အခွားကားကုမ်ပဏီတှကေ ပိုမိုကောငျးမှနျတဲ့ ကားတှကေို တညျဆောကျထုတျလုပျလာခဲ့ပမေယျ့ Ford ကတော့ Model T ရဲ့ စြေးနှုနျးကိုလြှော့ခနြိုငျဖို့ ဒီဇိုငျးနဲ့ အခွားလိုအပျခကျြတှကေို တိုးမွှငျ့ခွငျးမရှိခဲ့ပါဘူး.။ ဒါဟာ အခွားကားကုမ်ပဏီတှကေို အခှငျ့အရေးပေးသလို ဖွဈခဲ့တဲ့အတှကျ ကားလောကအနာဂတျအတှကျ အကြိုးရှိစခေဲ့ပါတယျ.။
Cadillac ကို Henry Ford က စတငျတညျထောငျခဲ့တာဖွဈပမေယျ့ ကုမ်ပဏီအတှငျး အငွငျးပှားမှုတဈခုရှိခဲ့လို့ နောကျပိုငျးမှာ Ford ဟာ Cadillac ကို စှနျ့ခှာခဲ့ပါတယျ.။ Cadillac ဟာ Ford မပါဘဲ ဆကျလကျရပျတညျရငျး 1912 အရောကျမှာ Touring Edition လို့ချေါတဲ့ ကားမျောဒယျတဈမြိုးကို ထုတျလုပျခဲ့ပါတယျ.။ ဒီကားဟာ Electric Starter ကို စတငျအသုံးပွုခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးကားဖွဈလာခဲ့ပါတယျ.။ ဒီကားကို မထုတျလုပျခငျတုနျးက ကားတှကေို စကျစနှိုးတဲ့အခါမှာ အငျဂငျြကို လကျနဲ့လှညျ့ပွီး နှိုးရတဲ့အတှကျ လကျကောကျဝတျနဲ့ လကျခြောငျးတှမှော ထိခိုကျဒဏျရာရမှုတှေ အမြားကွီးဖွဈခဲ့ရပါတယျ.။ ဒီအခကျြကွောငျ့ပဲ Touring Edition ဟာ ကားလောကကို တဈခတျေဆနျးစခေဲ့ပွီး အမြိုးသမီးကားမောငျးသူတှကေိုလဲ စှဲဆောငျနိုငျခဲ့ပါတယျ.။ ဒါကွောငျ့ Cadillac ဟာ ဒီကားရဲ့ ကွျောငွာတှမှော အမြိုးသမီးရုပျပုံတှေ ထညျ့သှငျးအသုံးပွုခဲ့ပါတယျ.။
Essex ဟာအစပိုငျးမှာ Hudson ရဲ့ ကုမ်ပဏီခှဲအဖွဈ စတငျခဲ့တာဖွဈပမေယျ့ လေးနှဈကွာအပွီးမှာ Model တဈခုအနနေဲ့ ပွောငျးလဲထုတျလုပျခဲ့ပါတယျ.။ အဲဒီလေးနှဈအတှငျးမှာ Essex ဟာ သေးငယျပွီး စှမျးဆောငျရညျမွငျ့တဲ့ ကားလေးတှေ ထုတျလုပျရောငျးခခြဲ့ပါတယျ.။ ဒါ့အပွငျ Essex ဟာ အလုံပိတျကားပုံစံကိုလဲ မိတျဆကျပေးခဲ့ပွီး အမိုးဖှငျ့ကားတှကေို အပို Option အနနေဲ့ ထုတျလုပျခဲ့ပါတယျ.။ Essex ကွောငျ့ပဲ ယနခေ့တျေကားလောကမှာ အလုံပိတျကားတှဟော ပိုမိုအသုံးမြားခဲ့ပွီး Convertable လို့ချေါတဲ့ အမိုးဖှငျ့ကားတှကေတော့ စြေးပိုကွီးလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ.။
1932 ခုနှဈအရောကျမှာ Ford's Model 18 ဟာ V8 အငျဂငျြတှကေို စတငျအသုံးပွုခဲ့တဲ့ ကားအမြိုးအစားဖွဈလာခဲ့ပါတယျ.။ Ford ဟာ Model 18 နဲ့အတူတူ ဆလငျဒါလေးလုံးထိုး Model B ကိုလဲ ထုတျလုပျခဲ့ပမေယျ့ Model 18 ရဲ့ အောငျမွငျမှုကိုတော့ မယှဉျပွိုငျနိုငျခဲ့ပါဘူး.။ Model 18 ရဲ့ 3.6L V8 အငျဂငျြဟာ မွငျးကောငျရေ ၆၅ ကောငျအား ထုတျလုပျပေးနိုငျပွီး ကားလောကတဈခုလုံးကို ပွောငျးလဲစခေဲ့ပွနျပါတယျ.။
1938 ခုနှဈထုတျ Y-JOB ဟာ ကမ်ဘာ့ပထမဆုံး Concept Car ဖွဈခဲ့ပါတယျ.။ General Motors ဟာ ကားမျောဒယျတဈမြိုးကို ထုတျလုပျရောငျးခခြွငျးမပွုခငျမှာ အမြားပွညျသူကို မိတျဆကျပေးတဲ့အနနေဲ့ Y-Job ကို Concept ကားအဖွဈ ထုတျလုပျပွသခဲ့တာဖွဈပါတယျ.။ ဒီကားမှာ Electric သုံး Windows တှေ၊ pop-up headlights တှေ၊ ပိုမိုပွားပွီး ပါးလြှတဲ့ တံခါးလကျကိုငျတှနေဲ့ လုံးဝိုငျးတဲ့ bumper တှေ တပျဆငျထားပွီး BUICK ရဲ့ 1950 ပွညျ့နှဈမြားအထိ အသုံးပွုခဲ့တဲ့ ဒီဇိုငျးပိုငျးတှေ အသုံးပွုထားတာဖွဈပါတယျ.။ ကားရဲ့ Shell ဟာလဲ ယနတေို့ငျအသုံးပွုနတေဲ့ ရတေံခှနျဒီဇိုငျး ဖွဈပါတယျ.။
မွနျမာပွညျမှာ လိပျခုံးကားလို့ ချေါဝျေါကွတဲ့ BEETLE ဟာ 1938 ခုနှဈမှာ ပိုမိုသေးငယျကဈြလဈြပွီး၊ မောငျးနှငျရလှယျကူတဲ့ဒီဇိုငျးနဲ့ စြေးလဲမကွီးတဲ့ မျောဒယျအနနေဲ့ စတငျထှကျရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ.။ ဒုတိယကမ်ဘာစဈအပွီး 1945 ခုနှဈမှာ ဒီကားဟာ အမြားပွညျသူအကွားရပေနျးစားလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ.။ The Beetle ကားဟာ 2003 ခုနှဈအထိ စုစုပေါငျး ၆၅ နှဈကွာအောငျ ထုတျလုပျခဲ့ပွီး ကမ်ဘာပျေါမှာ သကျတမျးအရှညျကွာဆုံး မျောဒယျအဖွဈ စံခြိနျတငျထားနိုငျခဲ့ပါတယျ.။ ဒီကားဟာ အစီးရအေမြားဆုံး ထုတျလုပျခဲ့တဲ့ကားအဖွဈလဲ စံခြိနျတငျထားခဲ့ပွီး သကျတမျးတဈလြှောကျ အစီးရေ ၂၁ သနျးအထိ ထုတျလုပျခဲ့ပါသတဲ့.။ ဒီကားကို ဒီဇိုငျးရေးဆှဲခဲ့သူကတော့ Ferdinand Porsche ဖွဈပါတယျ.။ သူဟာ နောကျပိုငျးထုတျလုပျတဲ့ သူ့ကိုယျပိုငျကားတှမှော Bettle ရဲ့ ကားဒီဇိုငျးဖွဈတဲ့ အနောကျအငျဂငျြနဲ့ နောကျဘီးယကျဒီဇိုငျးကို ဆကျလကျအသုံးပွုခဲ့ပါတယျ.။
Jeep ကားတှကေို ပထမဆုံး စတငျထုတျလုပျခဲ့တာဟာ အမရေိကနျနိုငျငံ Butler, Pennsylvania အခွစေိုကျ Bantam ကားကုမ်ပဏီဖွဈပါတယျ.။ ဒုတိယကမ်ဘာစဈအတှငျး စဈရေးကိစ်စတှမှော အသုံးပွုဖို့ စတငျထုတျလုပျခဲ့တာဖွဈပါတယျ.။ ဒီကားထုတျလုပျတဲ့အခြိနျမှာ စိတျဝငျစားစရာ အကွောငျးအရာတဈခုကတော့ ဒီကားကိုစတငျထုတျလုပျခဲ့တဲ့ ကုမ်ပဏီဟာ ဒဝေါလီခံရတော့မယျ့ကုမ်ပဏီဖွဈပွီး ဒီကားတှကေို သေးငယျတဲ့ စကျရုံလေးတဈခုမှာ ထုတျလုပျခဲ့တာဖွဈပါတယျ.။ ကားထုတျလုပျရာမှာ ပါဝငျသူတှကေတော့ စဈတပျရဲ့ အရေးကွီးစဈဆငျရေးကိစ်စတှကေို အောငျမွငျစဖေို့ ကူညီပေးဖို့ဆုံးဖွတျထားတဲ့ မွို့ခံပွညျသူလူထုက ဝိုငျးဝနျးကူညီပေးခဲ့ကွတာဖွဈပါသတဲ့.။ ဒီကားဟာ တောတှထေဲမှာ၊ တောငျတှကွေားထဲမှာ၊ ကမျးခွတှေပေျေါမှာ မောငျးနှငျသှားလာနိုငျဖို့ ထုတျလုပျဖနျတီးခဲ့တာဖွဈပွီး ယနခေ့တျေမှာလဲ အရငျခတျေနဲ့တူညီတဲ့ ရညျရှယျခကျြနဲ့ ရှဆေ့ကျနခေဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ.။
BMC ရဲ့ Mini ဟာ ဆီစားသကျသာမှု၊ ကုနျကစြရိတျနညျးပါးမှု စတဲ့ Economy ရညျရှယျခကျြတှနေဲ့ ကားအသေးစြေးကှကျကို ပွောငျးလဲခဲ့ပါတယျ.။ ယခုအခါမှာတော့ Mini တှကေို ရှအေ့ငျဂငျြ၊ ရှဘေီ့းယကျစနဈနဲ့ ပွောငျးလဲထုတျလုပျလာခဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ.။ Mini ဟာ နရောစားသကျသာစတေဲ့ rubber cones တှကေို ဂီယာစနဈအတှငျး စတငျအသုံးပွုခဲ့တဲ့ကားလဲ ဖွဈခဲ့ပါတယျ.။
1957 မှာ ထုတျလုပျခဲ့တဲ့ T43 ဟာ မောငျးနှငျသူရဲ့ အနောကျဘကျမှာ တပျဆငျထားတဲ့ ဆလငျဒါလေးလုံးထိုး 2.0L အငျဂငျြ မှတဆငျ့ နောကျဘီး ၂ လုံးကို ပါဝါပေးထားတာဖွဈပါတယျ.။ ဒီကားဟာ 1958 ခုနှဈမှာကငျြးပခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး Grand Prix ပွိုငျပှဲကို အနိုငျရခဲ့တဲ့ ကားဖွဈပါတယျ.။ စိတျဝငျစားစရာကောငျးတာကတော့ ဒီကားအနိုငျယူခဲ့တဲ့ ကားတှထေဲမှာ သူ့ထကျအငျဂငျြပါဝါမွငျ့မားတဲ့ 2.5L အငျဂငျြတပျဆငျထားတဲ့ကားတှေ ပါဝငျနခေဲ့တာဖွဈပါတယျ.။ ဒီကားဟာ ယနခေ့တျေကနြျောတို့ သိနကွေတဲ့ Grand Prix ပွိုငျပှဲဝငျကားတှကေို အဆငျ့မွှငျ့တငျပေးခဲ့တဲ့ ကားဖွဈပါတယျ.။
Mustang 1964 ဟာ Ford Falcon’s compact-sized economy car platform ပျေါမှာ အခွတေညျပွီး တညျဆောကျခဲ့တာဖွဈပမေယျ့ အရှဘေ့ကျပိုငျးကို ပိုမိုရှညျလြားစပွေီး အနောကျပိုငျးကို အနညျးငယျတိုထားခဲ့တဲ့အတှကျ ပိုမိုပွီး Powerful ဖွဈစတေဲ့အမွငျကို ရရှိစပေါတယျ.။ ဒီကားဟာ မိသားစုသုံးကားမဟုတျဘဲ Sport Type အနနေဲ့ထုတျလုပျခဲ့တာဖွဈပွီး Ford ကုမ်ပဏီရဲ့ ရောငျးအားအကောငျးဆုံး ကားတဈစီးဖွဈလာခဲ့ပါတယျ.။ ယနခေ့တျေအခြိနျထိ ပျေါပွူလာအဖွဈဆုံး sport ကားတဈစီးလဲ ဖွဈပါတယျ.။
1984 မှာ စတငျထုတျလုပျခဲ့တဲ့ Minivan ဟာ မိသားစုသုံးကားစြေးကှကျကို တဈနှဈအတှငျးပွောငျးလဲ စခေဲ့ပါတယျ.။ Minivan တှဟော Station wagon တှကေို အစားထိုးဝငျရောကျလာခဲ့ပွီး Chrysler ဟာ Minivan တှကေို ထုတျလုပျရာမှာ ဝယျလိုအားကို ပွညျ့မီအောငျ ထုတျလုပျနိုငျခွငျးမရှိတဲ့အထိ ရောငျးအားကောငျးခဲ့ပါတယျ.။ ဒါကွောငျ့ ပွိုငျဘကျတှဟော Minivan အမြိုးအစားကားတှကေို ထုတျလုပျလာခဲ့ပွီး စြေးကှကျဝစေုရယူဖို့ ယှဉျပွိုငျလာခဲ့ကွပါတယျ.။ Minivan ဟာလဲ ကားလောကကို ပွောငျးလဲစခေဲ့တဲ့ ကားအမြိုးအစားတဈမြိုးဖွဈခဲ့ပါတယျ.။
1995 ခုနှဈ Tokyo Motor Show မှာ Toyota ဟာ Hybrid ကားအမြိုးအစားတဈမြိုးကို မိတျဆကျပေးခဲ့ပါတယျ.။ ပထမဆုံး Prius ကားကို 1997 ခုနှဈမှာ စတငျထုတျလုပျခဲ့ပွီး Car of the Year Japan ဆု၊ 1998 ခုနှဈမှာ Automotive Researchers’ and Journalists’ Conference Car of the Year ဆုတို့ကို အသီးသီးဆှတျခူးခဲ့ပါတယျ.။ Prius ဟာ ယနခေ့တျေ Hybrid ကားတှရေဲ့ ပထမဆုံးမြိုးဆကျဖွဈခဲ့ပွီး Hybrid ကားလောကကို တဈခတျေဆနျးစခေဲ့တဲ့ ကားအမြိုးအစားတဈမြိုးပဲ ဖွဈပါတယျ.။
Posted at: 25-05-2015 15:41 PM